Abasetyhini abaninzi bayazibuza: "Ngaba ndinokukhetha ukuba ndizalelwe njani?". Ukuzalwa okunempilo akufanele kube yintlungu, ngoko ukulungiswa komntu kulungiselelwe.
Kodwa ukubandezeleka okukhulu akunakwenzeka nje "ukuphazamisa isimo sengqondo" somama ozayo - bahlala beyisithintelo ngokwenene ekuhambisweni okuqhelekileyo. Ukunciphisa ukubandezeleka komama kwaye ukukhawuleza nokuququzelela inkqubo yokuzalwa kuya kunceda ukukhetha okukhethiweyo ngokufanelekileyo kunye nokuzama. Ukususela kwixesha elidlulileyo, abafazi abasebenzayo beentlanga ezahlukeneyo bakhetha isikhundla esilungeleyo ngokwabo ukuze bavelise inzala. Abantu baseAfrika babhekana nokulwa emaplanga, bebambelele kwisibonda esasibekwe phakathi kwemithi emibini, kwaye xa kufika ukuhlaselwa, baqhekeka. Abahlali baseIndiya bazala, baxhomekeke kumasebe nakwiimidiliya. Kwezinye iintsapho zaseScandinavia, ukusuka kwesinye isizukulwana ukuya kwesinye, isitulo esikhethekileyo esisithintelayo esinomngxuma ophakathi sasidlulile.
EraseRussia amaqhayika ahlala ebeletha. Abancinci abasetyhini - ngamadolo abo, bakhawula okanye bema. Ngokuqhelekileyo ababelethisi banyanzelekisa umama ukuba ahambe, ahambe, awele emagumbini aphakamileyo, akhuphe aze afike. Uthinteke, njengomthetho, kuzo zonke ezine okanye ukuxhomekeka kwitafile okanye kwibhentshi. Sasivame ukwakha indawo yokuhlala kunye nesigxina esiqinileyo somthi, umthamo, isisu-eyasinceda ekubelekeni ixesha elide. Ngaloo nto waphonsa intambo okanye iibhande zekhanda, ngenxa yokuba lona wesifazane wafakwa kwindawo ephakamileyo. Amanyathelo afanelekileyo ancedisa ukuhanjiswa kwangethuba. Namhlanje, kwezinye izibhedlele zokubeletha, ezininzi sele zithatyathwe kubantu abamkelweyo kunye nabasetyhini bavunyelwe ukuba banikezelwe kwezinye iindawo, basebenzise yonke i-arsenal yobutyebi bemvelo elungiselelwe yendalo, eyenzelwe ukuququzelela izifundo kunye nokukhawuleza umphumo wokubeleka. Nangona kunjalo ukuba isikhundla sogqithiso kumva kwenza kube lula oogqirha kunye nababeleki ukuba bajonge kwaye balawulwe le meko, kodwa ke, kukhokelela ekubeni i-uterus icinezela kwimithambo yegazi edlula emthonjeni, ukuphazamiseka kwegazi okuphazamisekayo, kunye nokunikezelwa kwegazi komntwana. Umntwana uya phambili kuphela ngenxa "yamandla" kamama, ukuzalwa kuyancipha, kwaye ukuvakalelwa kwentlungu kukhula.
Ukuzalwa okuqhelekileyo ngoku kuyaqhelekileyo eNtshona Yurophu. Ngoku, le meko iqhutyelwa kakhulu kwiibhedlele zokubeletha zasekhaya, nakwamanye amazwe asekufuphi. Oku kubalulekile xa umama olindelekileyo engakwazi ukunyanzeliswa ngenxa yezizathu zempilo, umzekelo, ngenxa ye-myopia, ngomsebenzi omnene, xa umntwana ekhulile okanye unina unentsimbi encinci. Ibhinqa lilula kakhulu ukunyusa, ukumnceda liza ngamandla okudalwa kwamandla. Umntwana uhamba ngokucace ngakumbi kwaye ufumana i-oxygen engakumbi, kuba i-uterus ayicinezeli izitya zomama. Umama unikeza ukulawula okungcono kwimisipha yomqolo kunye nomshicileli, umgangatho we-pelvic kunye nayo yonke imisipha yomzimba, inkululeko yokuthatha isiphi na isikhundla esilungileyo, esinciphisa ixesha lezabasebenzi ngesiqingatha. Ngexesha elifanayo, umsele wokuzalwa ukhulu ngakumbi kunokuba unqamle ukulala, kwaye usana luwela phezu kwabo ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza. Ubungakanani bokuphuka buyancitshiswa. Oogqirha bathi i-placenta ngokubeletha ngokusemthethweni ihlukaniswe ngokukhawuleza, ngelixa iyanciphisa ukulahleka kwegazi, umntwana usoloko ebangela ukuqala ukumbumba kwaye athathe isifuba kwiminithi emi-5-10. Ukumiswa kwee-vertical kuqhathaniswa nabasetyhini abaneemvini ze-varicose, tk. kule ndawo, umthwalo kwimilenze unamandla. Enye ingxaki - izithandabuzi kunzima ukuphendula nokujonga ikhosi yeziganeko. Kwamazwe amaninzi aseAsia, eMzantsi Melika nakumaAfrika, kukho isiko lokuqhekeka, ngokusabalalisa amadolo. Oku kuyanceda kakhulu xa ukuhluthwa komlomo kuphelile, kwaye intloko yomntwana ayifuni kwisitya seplavic. Ukuphumelela kwabasebenzi ababuthathaka - umsele wokuzalwa ukhuliswa kakhulu, i-angle ye-pelvic incline eyenziwa ngexesha leekatikithi likhawuleza ukuphulwa, imizamo iququzelelwe, kwaye umntwana ushiya ngokukhawuleza.
Kodwa kwisithuba sokuqhawula, iinyawo zabasetyhini zikhawuleza ngokukhawuleza. Olunye ulahleko luyinto engazinzileyo, ngoko ke kwiindawo ezibhedlele kwizibhedlele zokubeletha zihlala zisebenzisa izitishi ezizodwa zokuhambisa kunye nomngxuma wokuphuma komntwana. Isixhobo esinjalo sinceda ukukhulula izihlunu, ukukhulula umthwalo ukusuka emilenzeni nasemithanjeni. Omnye umda - i-pose ifanelekile kuphela ekuzalweni "okulungileyo" xa umntwana ephuma entloko. Abancinci abasebenzi bezonyango banike inkxaso ngoncedo olufike ngexesha, ukuhlaziywa kuncinci. Ngenxa yokuba i-posture ikhuthaza ukubeletha ngokukhawuleza, kunye nezenzo ezingenakuthathalela, umntwana useengozini yokuwa kwinqanawa yokuzalwa aze akhatywe, kunye ne-mum - crotch ruptures. Ngoko ke, abanye oogqirha basebenzise ukuphumelela kwesi sigxina kwimibhobho, xa besondela kwiimvavanyo ezifanayo, loo mfazi udluliselwa kwindawo ehlukile.
Izindlela zesizukulwana kule meko zikhula ngokuthe ngcembe, zibe nexesha lokulula, kwaye umama uyagcinwa kwiikhefu ezingadingekile. Kwimeko echasene nayo - intloko ngentla yeplavis - ibhinqa limi phezu kweengalo zalo ezilungisiweyo - ukuzalwa kukukhawuleza. I-posture nayo ikulungele ukuba ngexesha elithile phakathi kokuphambana nomfazi angakwazi "ukuhlala phantsi ukuze aphumule", ehla entanyeni. Xa umama ozayo efumana izandla ezitheleyo - idala inkxaso evela kwibhola ekhethekileyo okanye imithwalo emininzi. Ukuba umntwana uzalwa ngaphambi kwesikhathi, unesisindo esiphantsi, kwaye umama wayesebenze ukulimala ngokubambisana, le meko iya kuba yinkqubela phambili. Ukunikezelwa kwegazi lomntwana akupheli ngexesha lokuzalwa, inkqubo ilula. Ukuvalelwa kabuhlungu kwimibhobho, eqhutyelwa kwesi sikhundla, kungaphantsi kwesimo esifanelekileyo. Namhlanje imeko ecaleni ngexesha lokubeletha iqhutyelwa eNgilani, e-Australia naseNew Zealand. Kula mazwe, iitheyibhile zokuhambisa zinoqwalaselo olukhethekileyo, kwaye abasebenzi bezonyango banezakhono ezifanelekileyo.
Ngentetho ye-pelvic ye-fetus, i-sedentary pose ifanelekile. Nantsi imfuno ebalulekileyo kukuba indawo yokuhlala ayinzima, ngaphandle koko ukuhanjiswa kuya kuncipha, kwaye intloko yesana ingonakaliswe. Umgangatho kufuneka ube mnqabileyo, mhlawumbi u-elastic. Kule njongo, ungasebenzisa iibhola ezinokuthabatha i-inflatable okanye iibhola zokubhukuda kwabantwana. Ukuhlala kwibhola kuya kunciphisa ukuvakalelwa kabuhlungu ngexesha lokulwa, ukunciphisa umthwalo emlanjeni. Ukongezelela, izithintelo zingathathwa zihleli emigodini ebhedeni, kwakhona ukuqinisekisa ukuba indawo yokuhlala ayiqineki. Ukuthembela ezandleni, umcamelo, emva kombhede kunceda ukukhulula umva kunye nezihlunu ze-perineum. Kwaye kwibhola, kwaye emkhombeni, kufuneka uqiniseke ukuba imilenze yakho ihlukaniswe ngokubanzi-ngelixa ukuvulwa kwesibeleko kwenzeka ngokupheleleyo. Ekuqaleni kwexesha lokugqitywa kwithuba lokugqibela, i-pose iyatshintshwa. Ukuba unethuba lokuba "uzame" kwiimeko ezahlukahlukeneyo ngexesha lokubeletha kwaye ukhethe indawo epholileyo kuyo - kakuhle. Kodwa kufuneka kukhunjulwe ukuba ngexesha lokunikezelwa kukho inkcenkceshe okanye ubunzima, ugqirha ojongene noxanduva ngokukhawuleza unokucela ukuba uthathe indawo yokuziphatha yokulala kunye nokubonelela ngoncedo oluyimfuneko.
Nangona kunjalo, kungekuphela nje ukukhetha ukulungiswa okufanelekileyo ngumzabalazo wokuzalwa kwemvelo kunye nokuphumelela. Ekhulile kwindawo ehleliweyo, ibhinqa linokungonwabi, ukwesaba neentlungu, ezisongela ukuvulwa komlomo wesibeleko nokunciphisa umsebenzi wabasebenzi. Ixesha lezithuba zabamama abaninzi likhuthaza ukunyakaza, ukutshintsha kwimeko, utshintsho ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye. Akusiyo into eyenziwa ngababelekazi baseRussia abavimbela ukulala-kwaye belele phantsi kwendlu, kwambi ngamanye amaxesha banyanzelekile ukuba benze umsebenzi ophezulu wendlu kuze kube yintloko yentombazane ibonise. Xa umzimba uhamba, ukujikeleza kwegazi kuphucula, izihlunu zifudumala, iifasms zisuswa. Ngoko kulungile ukuhamba. Kuvumelekile ukuba uhlale phantsi kwibhola uze wenze ukuhamba okuphumayo kunye neenqatha. Ukunyuka kwamaqhinga, kunye nezikhala phakathi kwazo zibe zifutshane? Ibhinqa liyakuma kwaye, lithembe phambili, lise izandla zayo emva kombhede kunye nombhede. Ukuvulwa kakuhle kwesibeleko kuya kunceda, ukuba wehla ngexesha elizayo elinqabileyo kwaye usasaza ngamadolo akho ngokubanzi. Ukuba umama ukhathele ngokupheleleyo ukuzama umzimba wakhe, unokuhlala emithonjeni okanye alala ngasecaleni, ebeka umquba phakathi kwemilenze yakhe, kwaye uphumule. Ukutshintshwa kwesimo esicacileyo kwisithuba esinqamlekileyo kuya kubangela ukuphuma kwegazi kwimifuno yemilenze. Bahlala behlushwa xa bebeletha, kwaye umfazi, othwalwa yimpembelelo enamandla, akayi kuhlala ekhumbula le nto. Kakade ke, akubona bonke oomama beli lizwe bazala abafazi abanikwe "inkululeko yokuhamba." Kodwa kunceda umama ozayo ukuba azi ukuba i-World Health Organization (i-WHO) kwiingcebiso zayo ithi: ngamnye umfazi unelungelo lokuzikhethela ngokwakhe ukuba yeyiphi isikhundla sokuthatha ngexesha lokubeletha. Ngoko ke, ukuba unqwenele ukuba ungathethi "ngokungabonakaliyo" ngexesha lokuzalwa okuzayo, kufuneka uqaphele ukukhetha ikhaya elifanelekileyo lokubeleka kwangaphambili. Ukuba uhlushwa ngumbuzo othi "Ngaba ndinokuzikhethela indlela yokuzala?" Nawe awuyazi impendulo echanekileyo, sinethemba lokuba sincede.
Ukuxinezeleka kwePostpartum kunye nendlela yokujamelana nayo
Indlela yokuseka ubuhlobo obusondeleyo emva kokubeletha
Indlela yokuzala ngokukhulelwa kokulibaziseka
Isidingo sokongeniswa ngokukhawuleza kwonyango
Iintsana zihlala zikhalaza ngesondlo esingenamsoco somntwana
Umona - lo mqondo okhethekileyo wobulungisa
Ungakuphelisa njani ukulala?
Uhambo lweeholide zonyaka
Kuthekani ukuba akukho isondo phakathi kobudlelwane?
Umlilo wesithando: ingubo yomtshato obomvu
Ukuze ufunde ukuphumla, ubuchule bokuxinezeleka akuyikusongela.
Indlela yokukhetha umthumeli?